Shangri-La emihlanu bayotywe slot umdlalo elinesihlanu paylines esisigxina ezisekelwe kwibali bangafi Tibet yamandulo. What makes this best slots jackpot game is mind blowing graphics along with an impressive jackpot reward. Lo mdlalo simisiwe sizoku loqukuqelo lomlambo nembono entabeni kaThixo yaye neyodwa ubukeka imilingo. Umculo kwisiqalo kumnandi kakhulu kwaye kunceda ugcine uzolile kwaye ingqondo igxile. Umoya kulo mdlalo ithatha ukuba kwihlabathi eyahlukileyo ngokupheleleyo banga ebonwayo enika ulwazi uyesabeka. Ukuze beka ukubheja kwakho, uyakwazi ukukhetha phantsi 20p uye ubuninzi umdlalo ngayo £ 90 ukujikeleza nganye.
Malunga umbhekisi phambili Shangri-La
Oku best Slots game jackpot zobugqi waphuhliswa NextGen (Nyx), esithandwayo Uphuhliso yekhasino uphawu ne engaphezu amabini eminyaka yamava. Baye wadala amakhulu kudidi ezahlukeneyo imidlalo yabaqhubi ukuba ubenze enye iinkampani ezilishumi aphezulu ehlabathini.
Le yenye kakhulu kwiindawo zokubeka jackpot umdlalo xa kufikwa imizobo ophezulu ezikumgangatho izandi. Kukho ezinye imiqondiso ezimangalisayo azo amhlophe, elephants, imikhombe, itempile, imela Lotus iintyatyambo. Uphawu ukuhlawula ophezulu namnye ngaphandle emhlophe enamandla uyabharhula kunye lokuwina inani 500 amaxesha isibonda. Ukuze ufumane ukuba kufuneka ukuba ube iisimboli ezintlanu phesheya payline inamandla, leyo umqolo iziko phezu reel. Kusetyenziswa ezi simboli ukuhlawula ephantsi ke diamond amakhadi okudlala, umhlakulo, sentliziyo club ezikhangeleka ngathi amatye. Kukho imiqondiso bonus ezisixhenxe kulo mdlalo kwaye iisimboli ezintathu ezahlukeneyo intombazana ezinqabileyo ezine ezimise embhoxo.
Iimpawu Wild: Umfanekiso intombazana entle kwindawo isakhelo yeyona uphawu zasendle yaye ifikelela kuzo zonke iisimboli isiseko. Ukongezelela, esinye umfanekiso nomlilo isakhelo ovuthayo ngokungakhethiyo ivela njenge asendle ukunikela ezihamba ngaphezulu yokuwina. Kukwakho amathuba lasendle eDibanisa okuninzi apho yonke into ngemfano intombazana kubonakala ukuba anikele winile engcono.
siwachithe Feature: Ivili umthandazo ifitsha usichithachithe le Slots game best jackpot ezintathu okanye ngaphezulu kwayo ichukumisa iimpawu bonus. Abahlanu lo phawu enqumla a payline kwakhona ichukumisa jackpot bonus apho ufumana 3000 lwemali uphumelela. Oku Ungafumana enkulu xa udlala abanama-value babheje.
Ne imizobo anomtsalane kunye nemiqondiso emibalabala, le best Slots game jackpot inika iintlobo iimpawu bonus unokoyisa ukusuka. Lo nguye inyaniso umdlalo ilungileyo ukuzama ukuba wena up ekwenzeni ezinye iimali ezinkulu.